I-Google Iphela Uhlelo lwe-Drone, Ingabe leli Rumor - ITS Tech School
16 uJan 2017
I-Google Iphela Uhlelo lwe-Drone, Ingabe lokhu kuyiRumor
Enye yezinhlelo ezisekelwe e-drone yakwa-Google ayikho ngokugunyaza, noma yikuphi ukufuna kwenhlangano yokudlulisa i-intanethi ngokusebenzisa uhlaka olungenalutho lwe-ethereal kuyindlela ende ekusebenzeni.
Inhlangano yokubeka i-X ye-Letter njengoba iphothulile sekuqedile i-Titan yayo eyandiswayo, eyayibhekene ne-drone ekhishwe yelanga ekwazi ukuhambisa ukufinyelela kwe-intanethi ezindaweni ezikude zomhlaba.
I-X, evame ukubhekwa njenge "Factory Factory," iqinisekise ukuthi iqembu le-Titan liye laphulwa phansi kungekudala ngemuva kokuthi iqembu lijoyine X ngonyaka odlule, i-9to5Google imibiko.
Iqembu le-50-abantu lizohambisa imisebenzi ehlukahlukene ngaphakathi kwenhlangano futhi ukuhlushwa kuthuthele eminye imisebenzi yenhlangano ye-intanethi esebenza ngokwezimali ngokwezimali, njenge-9to5Google.
Vala ukudluliswa kwe-drone ukwandisa i-Wing, i-X's venture I-Loon iqhubeka nokuphishekela ukuthunyelwa kwe-intanethi okusekelwe emoyeni.
Ihlukaniswe ku-Titan, eyayixhomeke emgodini we-plane oshukumisiwe, ukwandisa i-Loon isekelwe ohlelweni lwe-inflatables eziningi ezihamba ngokuzenzekelayo ezindizeni e-stratosphere of Earth.
I-inflatables idlulisa imishini yamakhompiyutha okuphatha okushisa ama-sun athola ama-LTE avela kumasistimu wangempela emhlabeni jikelele, okunikezwa khona kwi-inflatables ehlukene, okwenza uhlelo olwandisiwe lokutholakala ezindaweni zomhlaba ngaphandle kwe-intanethi.
Ukwandisa i-Loon iye yasungulwa kusukela ku-2013 futhi manje ingakwazi ukuthumela enye i-inflatable ohlelweni layo ngezikhathi ezithile.
Indiza ende kunazo zonke kusuka kwi-inflatable yomuntu yizinsuku ezingu-190, ezivikelekile ngaphezu kwezindiza ze-75,000 futhi zawela izizwe ze-19 zokuhlukanisa, njengoba kuboniswe ngu-X.
I-4 Izifundo Nokuqeqesha Okunangalisayo eMicrosoft
Lesi sishaja esisha se-Gmail sokwehlisa ubugebengu siyakhohlisa ngisho namakhasimende awazi kahle: Nansi imfihlo yokuyiqaphela